Gootichi misoomaa kaappitaala miliyoona 19 ol lakkoofsise eessaa ka’eeti?
Gootichi misoomaa kaappitaala miliyoona 19 ol lakkoofsise eessaa ka’eeti? Featured
Oboo Nugusuu Zoodee Buttaa
Qonnaan bulaa Godina Shawaa Bahaa, Aanaa Luumee Ganda Baallii Yeboo kan ta’an Obbo Nugusuu Zoodee Buttaa akkuma qonnaan bulaa kamiiyyuu kaleessaafi dheengadda jireenya harkaa gara afaanii geggeessaa turan.
Malli qonnaa isaan itti fayyadamaa turan mala aadaa waan ta’eef galiin isaan waggaatti argachaa turan quufsaa hinturre.
Haata’uutii Obbo Nugusuun paakeejiilee misooma qonnaafi tarsiimoo karaa ogeessota qonnaa baratan fayyadamuun akaakuuwwan midhaanii kanneen akka xaafii, shumburaafi qamadiifaa omishuun fayyadamummaansaanii mirkanaa'uu eegale.
Obbo Nugusuun haadha warraasaanii waliin ta’uun hojii qooddatanii lafa qonnaaa dabalataa kireeffatanii callaan isaanii daran akka fooyya'uuf cimanii hojjechaa turaniiru.
Dhiyeessii guddistuu callaafi sanyii filatamaa hojiirra oolchuun qoricha farrawwan aramaa garagaraa waan fayyadamaniif callaan isaanii daran akka dabale kan himan Obbo Nugusuun, kutannoon dhalli namaa hojiif qabu cimaa taanaan bu’aan argamus kan nama gammachiisu akka ta’e dubbatu.
Oyiruunsaanii daran baay’achuufi omishni midhaanota garagaraa heddummaachuu irraa kan ka’e midhaan isaanii kombaayinara kireeffachuun yeroon sassaabuun kaan nyaataaf kaawwatanii isa kaan ammoo gabaaf dhiyeessuun kallattii itti galii isaanii guddisan barbaaduu ittifufan.
Sochii misooma qonnaa kanaaf xiyyeeffannoo kan kennan Obbo Nugusuufi haati warraasaanii waggoota muraasa booda baabura midhaan daaku 11 Aanaa Luumeefi Magaalaa Bishooftuutti dhaabuun galiisaanii ol kaasaa hawaasaafis tajaajila kennaa jiru. Namoota soddomaafis carraa hojii bananiiru.
Mala qarshiin itti argamu kan baratan Obbo Nugusuufi haati warraasaanii midhaan dur gurguraaa turan daakuun gara daabbootti jijjiiranii daldala daabboofi suuqii babal’ifachaa jiru.
Obbo Nugusuun haadha warraa tokkoofi ijoollee 12 akka qaban nutti himanii, ijoollee isaanii keessaa shan yunivarsiitii akka galfataniifi tokko ammoo sadarkaa digrii lammaffaatti barsiisuun hojiirratti akka argamu dubbatu. Ijoolleen isaanii hafanis barnootatti qaxalee waan ta’aniif mana barnootaa dhuunfaatti barsiifataa akka jiran ibsu.
Galiin kiyya akka guddatuufis qonnaa cinatti hojii daldalaa, mana nyaataa, mana dhugaatii akkasumas manneen kireeffaman 16 irraa ji’aan galii olaanaa argachaa akka jiranis ni dubbatu.
Obbo Nugusuun hojiilee irratti bobba'an kanneeniin namoota hojii dhabeeyyii hedduuf carraa hojii bal'aa banaa akka jiran ni ibsu.
Yeroo ammaatti Obbo Nugusuun kaappitaallisaanii waliigalaa miliyoona 19 waan caaleef gara indastiriitti cehuuf qophiirra akka jirani ni himu.
Tattaaffii cimaa qonnaan bultoonni akka Obbo Nugusuufaan taasisaa jiran jajjabeessuuf mootummaan guyyaa qonnaan bultootaafi gartokkeen horsiisee bultootaa Dilbata darbe Adaamaatti kabajamerratti kanneen adda duree ta'an tiraaktara qonnaa badhaaseera.
Badhaasa isaaniif kennametti kan gammadan Obbo Nugusuun fuulduratti warshaa daakuu dhaabuun cehumsa qonnarraa gara indastiriitti taasifamu dhugoomsuuf qophii ta’uu yoo himan, of fayyaduun alatti carraa hojii dabalataa banuufis fedhii akka qaban dubbatu.
Walumaagalatti hojii qaban tokko osoo hintuffatiin tarsiimoofi paakeejiilee misooma qonnaatti fayyadamuun omishaafi omishtummaa ofii guddisuun wabii midhaan nyaataa mirkaneessuu maddiitti ce'umsa qonnarraa gara indastiriitti taasifamu milkeessuuf tattaafachuun dhimma filannnoo hinqabneedha.
Torban kana/This_Week 7199
Guyyaa mara/All_Days 1291710